Cadayga, Cadayga Antimicrobial, Caday jilicsan - Enyuan
Caday polymer tpu bristles caday ka ilaaliya t ...
Huaian Enyuan Dalxiisyada Wax soo Saarka Co., Ltd.
Huai'an Enyuan Tourist Products Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay soo saarista iyo farsamaynta alaabada cadayga, inta badan oo ay ku jiraan taxanaha cadayga iyo boqollaal alaabood oo kale. Waxyaabaha ugu muhiimsan: cadayga balaastigga ah, cadayga been abuurka ah, xoqida carrabka, burushyada dhexdooda, cadayga bamboo, iwm. Warshadda shirkaddu waxay dhererkeedu dhan yahay 4000 mitir. Waxaa jira in ka badan 80 shaqaale.
Farqiga u dhexeeya nabarrada adag iyo kuwa jilicsan ee madaxa cadayga
Marka la barbar dhigo cadayga adag, burushka jilicsan ee burushka jilicsan ayaan waxyeello u lahayn ilkaha waxayna ku guuleysteen macaamiil badan. Aynu si dhow u eegno farqiga u dhexeeya burushka caday ee adag iyo kuwa adag, iyo sida loo isticmaalo cadayga jilicsan. Maxay ku kala duwan yihiin caday jilicsan a ...
Sida loo doorto cadayga carruurta
Waalidiin badan ayaa kobcin doona dhaqanka caruurtooda ee ah ilka cadayashada ilaa caruurnimadooda, marka goorma ayey tahay inay caruurtu si fiican u cadayaan ilkahooda? Caday caday nooca ay tahay inaan doorto? Maxay yihiin taxaddarrada marka la dooranayo cadayga carruurta? Aynu maanta wadaagno: Sida loo doorto chi ...
Sida loo doorto cadayga
Ugu horreyntii, markaad iibsaneyso koob lagu nadiifiyo afka, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato naqshadeynta farsamaysan ee cadayga, taas oo lagu sharraxay saddexda tallaabo ee soo socda. Marka hore, waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah u yeelano qaabka naqshadeynta cadayga, sida naqshadda qaab-dhismeedka, oo ku habboon ca afka ...
SOO SAARKA BADAN
Gadaal fiiri muuqaalka!